सार्वजनिक भयो एसईईको तालिका (हेर्नुहोस तालिका सहित) – Nirantarkhabar
सार्वजनिक भयो एसईईको तालिका (हेर्नुहोस तालिका सहित)
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको एसइई परीक्षा चैत १० गतेबाट शुरु गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको छ । चैत १० गते आइतबारबाट सुरु हुने परीक्षा २१ गते बिहीबारसम्म चल्नेछ । चैत १० र ११ गते लगातार अनिवार्य अंग्रेजी र नेपालीको परीक्षा हुनेछ । चैत १३ गते अनिवार्य गणित र १४ गते अनिवार्य विज्ञानको परीक्षा छ । प्राविधिक धारको समेत गरी चैत २१ गते सबै परीक्षा सम्पन्न हुनेछन् । परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म चल्ने छ ।
देशभरबाट एसइईमा सहभागी हुने विद्यार्थीको अन्तिम तथ्याङ्क आउने क्रम जारी रहेकोले अहिले यकिन संख्या तय भईनसकेको बोर्डले जनाएको छ । गत वर्ष चैत ८ बाट शुरु भएको परीक्षामा नियमित र एक्जाम्टेड गरी पौने ६ लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी सहभागी थिए ।
परीक्षाका लागि आवश्यक प्रश्नपत्र तयारी र नतिजा प्रकाशन केन्द्रबाटै हुने बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले बताए ।
तीन बर्ष अघि जारी भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन अनुसार एसईई परीक्षा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुनु पर्ने थियो । तर यस बर्ष पनि बोर्डले पर्याप्त तयारी नभएको ‘वहाना बनाउँदै’ संघीय स्तरबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । परीक्षाको संवेदनशीलताका लागि आवश्यक पूर्वाधार र ब्यवस्थापन नहुँदा संघीय स्तरबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तय गरेको पौडेलको तर्क छ ।
‘परीक्षा भनेको निकै संवेदशशील कुरा हो, यसलाई ब्यवस्थापन गर्नु अघि धेरै कुरा तयार हालतमा रहनु पर्छ, तर अहिले प्रश्नपत्र छाप्दा प्रेसमा दिनु पर्ने सुरक्षा मात्रै हैन प्रदेश स्तरमा कोईश्चन ब्याङ्क समेत नभएको अवस्था छ’ उनले भने ‘यी यावत आवश्यकीय कार्य यो बर्ष भरीमा सक्ने र आउँदो बर्ष देखि प्रदेश स्तरमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
यसका लागि प्रश्नपत्र तयार गर्ने शिक्षक छनौट, प्रेसको छनौट लगायतका सुरक्षा सम्बद्ध कृयाकलाप सक्ने गरी बोर्डले काम गर्ने उनले दावी गरे ।
प्रश्नपत्र केन्द्रबाटै तयार भए पनि उत्तरपुस्तिका छपाईको काम भने प्रदेशस्तरबाटै हुने पौडेलले बताए ।
आफ्नो गाडी आफै जलाउनेलाई के मुद्दा चलाउने ? सकसमा प्रहरी
स्वदेशमै उत्पादित गुणस्तरयुक्त सामाग्री प्रयोग गरेर अरुण–३ जल विद्युत आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड
मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई प्रदेश २ सरकारको रोजगारी उपहार